IKhabinethi Yeminyango Yeminyango Abakhiqizi & Abahlinzeki - China IKhabinethi Yomnyango Wamahenjisi Emnyango
Umnyango weKhabinethi Ngempela Umnyango Ofihlekile Ofihlekile
Umnyango weKhabinethi uvaliwe uthambile ufihlwe ihinji elenziwe ngezinto zinc ingxubevange. Le hinge ivame ukusetshenziselwa umnyango wekhabethe lohlaka lwe-aluminium. Ihenjisi elifihlwe ngeqiniso lihlukile ngomnyango wefenisha yendabuko. Ngeke uwubone umzimba we-hinge ebhodini eliseceleni lekhabethe. Yenza ikhabethe lakho lekhabethe libukeke kahle. Uma unesithakazelo kumnyango wethu, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Uhlobo lwe-H11 lwaseMelika lwengalo emfushane lobuso behenjisi i-1/2 imbondela
Isingeniso:Uhlobo lwe-H11 uhlobo lwengalo emfushane lobuso be-hinge 1/2 imbondela evame ukusetshenziswa ekhishini lohlaka lobuso namakhabethe okugezela Uma unesithakazelo kumikhiqizo yethu, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Imodeli No .: H11
US2D12 American uhlobo 2D ukulungiswa hinge
Isingeniso:I-US2D12 American type 2D ukulungiswa hinge ngokuvamile isetshenziselwa ifreyimu yobuso ekhishini namakhabethe okugeza. Uma unesithakazelo kumikhiqizo yethu, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Imodeli No .: US2D12
I-US2D12S 2D Soft icwecwe lobuso be-hinge 1/2 ″
Isingeniso:I-US2D12S 2D Soft compact compact Face Frame Hinge 1/2 ″ imvamisa isetshenziselwa ubuso bohlaka lekhishi namakhabethe okugezela. Uma unesithakazelo kumikhiqizo yethu, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Imodeli No .: US2D12S
I-Hinge yohlaka olufihlekile 3/4 ″ yamakhabethe ohlobo lwaseMelika
Isingeniso:Umcengezi wobuso obufihlekile u-3/4 ″ wamakhabethe ohlobo lwaseMelika ajwayele ukuwasebenzisela ifreyimu yobuso nekhabethe lokugezela. Uma unesithakazelo kumikhiqizo yethu, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Imodeli No .: US2D34S
I-US2D114 uhlobo lwaseMelika lokulungiswa kwe-2D hinge
Isingeniso:I-US2D114 American type 2D ukulungiswa hinge ngokuvamile isetshenziselwa ifreyimu yobuso ekhishini namakhabethe okugezela. Uma unesithakazelo kumikhiqizo yethu, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Imodeli No .: US2D114
I-3D Adjustment face frame hinge 1 intshi imbondela yekhishi namakhabethe okugezela
Isingeniso:I-3D Adjustment face frame hinge 1 intshi imbondela yekhishi namakhabethe okugezela, ngaphandle kokuvala okuthambile, imbondela engu-1 ought, insimbi ebunjiwe, i-nickel yangaphakathi. Nge 45mm isikulufa imbobo iphethini, isikulufa mathupha isicelo. Ukulungiswa kweCam namathebhu ama-4 wokubekwa okulula onqenqemeni lohlaka lobuso. Iphakethe elijwayelekile ngalinye lingenazo izikrini, ukupakisha ngobuningi ebhokisini.
Imodeli No .: I-US3D1
Uhlobo lwe-US3D1S American ukulungiswa kwe-3D okujwayelekile
Isingeniso:Uhlobo lwe-US3D1S American ukulungisa i-hinge ejwayelekile evame ukusetshenziswa ekhishini lohlaka lobuso namakhabethe okugezela. Uma unesithakazelo kumikhiqizo yethu, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Imodeli No .: I-US3D1S
I-hinge yesango le-3D eliguquguqukayo lobuso bekhabethe 1/2 1/2
Isingeniso:I-hinge yomnyango eguquguqukayo ye-3D yohlaka lobuso ikhabethe 1/2 ”imvamisa isetshenziselwa ikhishi lohlaka lobuso namakhabethe okugezela. Uma unesithakazelo kumikhiqizo yethu, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Imodeli No .: I-US3D12
1/2, umfutholuketshezi ezithambile close 3D ekhishini adjustable ebusweni Uhlaka ikhabethe umnyango umnyango
Isingeniso:1/2, umfutholuketshezi othambile osondelene no-3D oguqukayo ekhishini lobuso bekhabethe lomnyango wehenjisi uvame ukusetshenziselwa ubuso bohlaka lekhishi namakhabethe okugezela. Uma unesithakazelo kumikhiqizo yethu, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Imodeli No .: US3D12S
1-1 / 2, umnyango we-Hydraulic hinge eseduzane wobuso bekhishi nekhabethe lokugezela
Isingeniso:1-1 / 2, umnyango we-Hydraulic hinge eseduzane wobuso bekhishi namakhabethe okugezela ngokuvamile asetshenziselwa ifreyimu yobuso ekhishini namakhabethe okugezela. Uma unesithakazelo kumikhiqizo yethu, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Imodeli No .: US3D112S
1-1 / 4 ″ Imbondela u-105 Degree 2 Cam Cindezela ku-Hinge Yobuso Ihabhinethi Yehenjisi
Isingeniso:1-1 / 4 Uma unesithakazelo kumikhiqizo yethu, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Imodeli No .: US3D114